Ny fanginan’Andriamanitra dia miteny amiko hoe: Andraso
"Tsara ny miandry ny famonjen’i Jehovah amin’ny fanginana."Fitomaniana 3:26
"Jehovah ô, maraina no handrenesanao ny feoko; maraina no hivavahako aminao, ka hanandrandra aho."Salamo 5:3
Andriamanitra dia Andriamanitra miteny, Andriamanitra tena akaiky. “Ny finoana dia avy amin’ny toriteny … avy amin’ny tenin’i Kristy” (Romana 10:17). Raha tsy miteny Andriamanitra, dia tsy hisy mpino! Rehefa mamaky ny Baiboly isika, ny Baiboly izay velona sy mahery (Hebreo 4:12), dia mihaino izay lazain’Andriamanitra amintsika, ary mandray ny teniny mba hiainana izany.
Andriamanitra dia miteny ihany koa, ao amin’ny fieritreretana sy fo miafina ao. Matetika dia tsy feo ren’ny sofina izany, nefa manome antoka antsika Izy fa henony ny vavaka ataontsika, ary fantany ny toe-javatra iainantsika. Izany dia mitondra ho antsika fiadanana, fanazavana vaovao, fahafantarana tsara kokoa ny sitrapony…
Saingy, indraindray dia mangina Andriamanitra. Resahin’ny Baiboly ireny fanginan’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny mpino ireny. Koa aoka isika tsy ho gaga raha mandalo fotoana izay toa anginan’Andriamanitra ihany koa; ary raha izany no miseho, dia izao no lazain’io fanginana io amiko: «Andraso!»
Ny loza mitatao, amin’izay, dia ny hamoronako valinteny mba hamenoana io fanginana io amina teny tsy avy amin’Andriamanitra, ka mandiso lalana ahy. Ny fangatahana torohevitra amin’olon-kafa, fa tsy miandry ny valiny avy amin’Andriamanitra, dia matetika no mandiso toa izany koa. Ary raha misy namana mangataka torohevitra amiko rehefa mangina Andriamanitra, dia tsara kokoa raha miteny aminy aho hoe: «Andraso. Afaka miara-mivavaka aminao aho, saingy tsy manana valinteny omena anao».
Ny fotoanan’ny fanginana eo amin’ny fiainantsika dia fotoana mahatonga ny finoana hahery kokoa, raha matoky isika, ary mihaino an’Andriamanitra. Ho hitantsika fa ny valiny omeny dia tsara kokoa sy lehibe kokoa noho izay noheverintsika.